China Red Sofa Sets Outdoor Garden Furniture New Design Patio Lounge Sofa, wholesale Outdoor Sofa on TopChinaSupplier.com
IFOSHAN SHUNDE AOBEI FURNITURE CO., LTD.
Ifanitshala yePatio, Ifenitshala yeLounge, Ifenitshala yasekhaya yeziTayile / umboneleli eTshayina, ebonelela ngaphandle kweKhaya Ihotele yeGadi Sofa Ifenitshala Icandelo Lecandelo leSofa, iFanitshala yangaphandle yeGumbi laseKhaya Iiseti zeNdawo yokuLungiselela iLounge yegumbi lokugcina igumbi lendlu enomatshini. Ifanitshala yeLounge Corner yeSofa kunye nokunye.
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Isofa yangaphandle I-China Red Sofa ibeka iFenitshala yangaphandle yeGadi yePatio entsha yePatio Lounge Sofa
I-China Red Sofa ibeka iFenitshala yangaphandle yeGadi yePatio entsha yePatio Lounge Sofa
I-10 Piece I-US $ 200.00 / isiqwenga
Isofa ebomvu ibeka ifanitshala yangaphandle yegadi yoyilo kwigumbi lokuphumla lesofa
Iinkcukacha ezifanayo zeMveliso yokuQokelelwa
IFOSHAN SHUNDE AOBEI FURNITURE CO., LIMITED inikezela nge-profioukuveliswa kwempahla kunye nokuyilwa ngokubanzi kwefanitshala yangaphandle enezinto ezahlukeneyo zoyilo kunye nezixhobo. Samkela ii-oda ze-OEM kunye ne-ODM, ngenjongo zokubonelela ngenkonzo elungileyo, elungileyo yefanitshala yangaphandle esemgangathweni ene-reasoIxabiso elifanelekileyo. Ukunceda umthengi wethu afezekise ukukhula kwe-odolo, sibonelela nge-R & D yoyilo kunye ngexesha ngalinye, ukuphuhlisa uyilo olutsha kunye nolungileyo ngokuthe ngqo kwintengiso yomthengi Izinto eziluncedo Zethu:
1) Yamkela i-profioUyilo enziwe ngokwezifiso. (I-OEM / i-ODM / i-R & D)
2) Amava kweminyaka eli-13 yokwenziwa kwefanitshala yangaphandle kunye nokuthumela ngaphandle.
3) Ukubonelela Imveliso ebanzi enemiyilo eyahlukeneyo kunye nezixhobo.
4) Iminyaka emibini yemveliso iwaranti ngokusisiseko.
5) Nikeza ngenkonzo yemifanekiso ephezulu.
6) Nika iifoto zenkcukacha zojongiso lwakho olusondeleyo kumyalelo ocela ukuya kuthi gai-ntainer ilayishiwe.
7) Zonke izinto zokugcina ukutya ziya kusingathwa kwisithuba seentsuku ezingama-1-3.
8) Ixesha lesampula ziintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-15.Injongo yethu kukwenzela ukuba uzive ngathi ungumnini-wabaphathi kunye neqabane elisondeleyo nathi.
Siyathemba ukuba unawo umzuzu wokujonga kwikhathalogu yethu kunye newebhusayithi, where ungabona uluhlu olubanzi lweemveliso zethu.
Kwakhona, siyayamkela i-Persoukundwendwela kumzi-mveliso wethu kunye negumbi lokubonisa, elingasivumela ukuba sibonise iimveliso zethu kwaye siphendule imibuzo yakho ngqo.
Nceda uzive ukhululekile ukubambisanausiphathe ngalo naliphi na ixesha, enkosi!
1. Yintoni i-MOQ yethu?
Impendulo: 1X40HQ (uyilo olu-5 lomxube luyamkeleka.)2. Yintoni imveliso yethu kunye nexesha lokuhambisa?
Phendula: Ngokwesiqhelo 30-45 kwiintsuku emva koku-odola coukuqinisekisile kwaye kuhlawulwe intlawulo ihlawulwe. Ukulungelelanisa ubungakanani beprojekthi ehambelana nokuguquguquka, ixesha lokuhanjiswa liya kunikezelwa ngokobungakanani beenkcukacha kunye noyilo.3. Ngawaphi amagama amaxabiso esinokuwanika?
Phendula: Ixabiso lomsebenzi owenziwe ngaphandle, i-FOB shenzhen port okanye i-CIF kwindawo ekuyiwa kuyo.4. Ithini imigaqo yethu yokuhlawula xa usenza iodolo / confirm / ied?
I-T / T: Iipesenti ezingama-30 zokuhlawula ngaphambi kokuveliswa, kwaye ama-70% ahlawulwe ngaphambi kokulayisha kumzi-mveliso.5. Zeziphi izixhobo esinokuzihambisa?
1. Ityhubhu yeAluminiyam fngumbala onemilo eyahlukeneyo ngokweemfuno zemveliso okanye uyilo.
2.Umpako wamandla ngokweentlobo zemveliso. Ifenitshala yokwaluka e-Rattan enemibala efanayo yomgubo werattan; Iifenitshala zealuminiyam zangaphandle ezingaphandle ezinemveliso yangaphandle yomgubo.
3. I-rattan ye-PE ibonelela ngesiqinisekiso se-2yrs, isiqinisekiso se-3yrs kunye nesiqinisekiso se-5yrs ngokwesicelo.
4. Umqhaphu kunye ne-UV engasebenziyo yelaphu elinika isiqiniseko esiyi-1-2yrs, isiqinisekiso esi-2 ukuya kwezi-3 okanye isi-loNger ixesha lokuphila ngokwesicelo.
5. I-Cushion ene-25-28 density eqhelekileyo i-resin foam, kunye ne-30-33 density ngokukhawuleza eyomileyo ye-foam yokuhamba kwamanzi.
6. Isikhumba esichasayo se-PVC nge-3yrs guaranteed.
7. Iinkuni zeBurma teak ngepolishi elungileyo, ifile kunye noyilo lwe-tenon edibeneyo.
8. IPolywood enesiqinisekiso se-2yrs okanye isi-3yrs isiqinisekiso ngokwezicelo.
9. Imarble, iglasi evuthayo, iglasi yeLitye, iglasi yeCaremic, iAluminiyam kunye ne-HPL njengeetafile eziphezulu.
10. Izixhobo zokusebenza zeGadi, iYadi, iPatio, icala leLwandle, i Poolside, ihotele, ihotele, Ivenkile yekofu, iBar, nayo yonke indawo yokuphumla engaphandle. 6. Sisiphi isiqinisekiso esinokusinika?
Phendula: Ngokusisiseko sinikezela ngesiqinisekiso se-2years. I-3years okanye i-5years isiqinisekiso singabonelelwa ngokufaka i-accoding kwiimfuno ezahlukeneyo. Pls cousiphathe ngokukhululekileyo aqiniseka ukuba ufuna ukusinika isiqinisekiso7. Yintoni angasemva kwethuIzixhobo zokufotokopa kunye neenxalenye ukuthengiswa kweenkonzoUmatshini wokwenza izinto zorhwebo Umkhenkce kunye nesisombululo esikumgangatho ophosakeleyo?
Impendulo: Gcina unike isithuba paIzixhobo zeCable rts, buyiselaizinto ze-wicker xa kufuneka. Ukubonelela ngefenitshala yangaphandle yefenitshalaubuchwephesha buvuma uqeqesho lwakho xa lufuneka. Qhubeka ubonelela zoyilo zakutshanje kunye nemibala yokukunceda ukuba ukhuthaze ukuthengisa. Ukubuyiselwa ngokupheleleyo okanye ukubuyisela endaweni into efanelekileyo!
FOSHAN SHUNDE AOBEIUmqhekezi kunye noMkhuseli IINKCUKACHA CO., LIMITED ibonelela ngenkonzo yemveliso ebanzi yangaphandle yefanitshala evela yoyilo eyahlukeneyo kunye nezixhobo. Sijonge ukubonelela ngenkonzo elungileyo, iimpahla ezilungileyo zangaphandle ezisemgangathweni ngamaxabiso afikelelekayo kubathengi bethu ngokwezicelo. Omnye wabasunguli beenkampani uJennifer unamava okuthengisa ali-12yrs kwimizi-mveliso yefanitshala yangaphandle, ukuba aqonde ngokucacileyo aiimfuno zabathengi kunye nokubonelela ngokuphendula ngokukhawuleza ngolwazi olupheleleyo lweemveliso. Omnye wabasunguli beenkampani zethu uFrank unamava obunjineli angama-12yrs kuphuhliso lwefanitshala. Sibeka ngokungqongqo umgangatho coNgena kuzo zonke iinkqubo zemveliso ukusuka ekuyileni uye kuthi garame / conukuqina / i-iation, ukuluka / ukudibanisaukuqina / i-iation, umsi wamalahleisiqinisekiso kude kube yiphakeji yokhuseleko ngokwezicelo. Ngaphandle koko, sinalo iqela lokuphuhliswa kwendlu elinamaqhinga okusebenza ukuze kubekho intsebenziswano kuphuhliso loyilo olutsha kunye nemveliso yokuthengisa ehambelana nesiko. Ngenkonzo elungileyo, ulawulo olusemgangathweni olungileyo, iimveliso ezisemgangathweni, amaxabiso afikelelekayo kunye nexesha lokuhanjiswa kwexesha, thina I-AOBEI FURNITURE CO., LIMITED iya kuba ngumxhasi wakho othembekileyo e-China!
AmaIsixhobo seMagnetic nda Leung
mobile : + 86 137 6095 8115
iseti yewicker yefenitshala emodareyitha yasetafileni
US $ 735.00 / Iiseti
Igumbi lokuhlala fenitshala Folding Indoor Swing Sihlalo Egg 2
Intengiso eshushu yeFlat Rope Sofa enye
US $ 250.00 / Iipayile
Iseti yefanitshala yeenkuni
Ifenitshala yasekhaya yanamhlanje
1 Iseti yefanitshala yeSofa
3 Iseti yefanitshala yeSofa
Iseti yefanitshala yeSofa yanamhlanje
Isihlalo seFenitshala yeZitulo
Ifanitshala yeSofa yeenkuni
I-China Chinese Igadi yangaphandle uPatio uLobby Alumini
US $ 60.00 / Isiqwenga
I-China Chinese Ngaphandle kwegadi yefanitshala iseti iRati
US $ 300.00 / Isiqwenga
I-China yePhandle yeDenkile yangaphandle yeDesitile yeZitiya zeGadi
US $ 100.00 / Isiqwenga
I-China yanamhlanje igadi yangaphandle I-Patio Ihotele yeKhaya i-D
US $ 200.00 / Isiqwenga
I-China yanamhlanje iGadi yasePatio iPatio restaura
Nksk Kamyee Ho
Immimiselo & nemiqathango Isibhengezo umthetho wabucala IFOSHAN SHUNDE AOBEI FURNITURE CO., LTD.